ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သောအရာများ အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွား Theresa R. Fianko
ဒူဘိုင်း Young ကမိသားစုများအတွက်အဆိုပါစံပြကံကြမ္မာလား?
ဇြန္လ 8, 2019
ဒူဘိုင်းထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချက်အချာအဖြစ်အများအပြားကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့နာမည်ကျော်နှင့်စမတ်မြို့ဖြစ်၏။ ယင်း၏ 85 သန်းခန့်မှန်းခြေလူဦးရေရဲ့အကြောင်းကို 3% ပြည်ပရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူခေတ်မီမြို့အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေလူတွေအသက်ရှင်နေထိုင်, ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပြောင်းရွှေ့မမြင်စဖူး။ ဒူဘိုင်းခရီးသွားဧည့်မှကြိုဆိုပေမယ်နေထိုင်သူများအဘို့အငြိမ်းချမ်းစွာဆိပ်သာလုပ်ရသောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။
အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စနစ်များသင်တစ်ဦးအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရှေ့၌သင်တို့အခွင့်အရေးများကိုသိနားလည်သင့်ပါတယ်ဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ပေးသောဥပဒေများဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်, ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်သင်ရှာတွေ့ကိုမဆိုကဏ္ဍနေကြသည်။ အလုပ်သမားအုပ်စုများသို့သော်ယူအေအီးအလုပ်သမားဥပဒေများသူတို့တစ်တွေ, မျှတလုံခြုံပြီးကျန်းမာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်စေရန်လုပ်သားအင်အားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှရှုထောင့်ကိုဂရုစိုက်, ဒီမှာကအရမ်းပေါ်ပြူလာမရှိကြပေ။
credit Instagram ကို: https://www.instagram.com/hhshkmohd/
အဖွဲ့အစည်းများအလုပ်သမားကိစ္စများအလုပ်ရှင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများအကြားထိထိရောက်ရောက်နှင့်ကိုင်တွယ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေသည်သောအစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးအတွက်အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ ဒါဟာညာဘက်ဖြစ်စဉ်များစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အကျိုးအမြတ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌နောက်တော်သို့လိုက်ကြသည်ကိုသေချာစေရန်နှစ်ဖက်စလုံး၏တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ပညတ္တိကျမ်းအလုပ်အကိုင်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ကိစ္စများ၏အမှု၌ဖက်ပါတီများအဘို့ပြဌာန်းချက်စေသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် www.uaelaborlaw.com တွင်, သငျသညျနာရီ, ဆိုင်းနှင့်အားလပ်ရက်များနှင့်အလုပ်ရှင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများအပေါငျးတို့သအခွင့်အရေးများလုပ်ဆောင်နေ, အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့မက်လုံးပေးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျဒူဘိုင်းအသစ်ဖြစ်ကြသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်သောအခါ, အလုပ်သမားဥပဒေများဖတ်ပါနှင့်သိရန်သေချာပါစေ။ ဤဥပဒေများကိုနားလည်နှင့်သင့်ရွေးကောက်တော်မူအဖွဲ့အစည်းကနှင့်သင်၏အလုပ်အကိုင်အစဉ်နှင့်အပြီး, ရှေ့တော်၌အကောင်အထည်ဖော်များ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကျမည်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာအပိုဒ်မှထပ်မံရှင်းလင်းချက်ချင်ပါတယ်လျှင်, အလုပ်သမားစင်တာများမဆိုဆက်သွယ်ပါ, သင်ကူညီပေးရန်ရရှိနိုင်မယ့်ကိုယ်စားလှယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးလစာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်လူတိုင်းအခွန်လွတ်ဝင်ငွေပေးထားပါတယ်။ ဤသည်မြို့ထဲသို့ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံအားလုံးအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများဆွဲဆောင်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်အသက်တာ၏ပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာလုပ်ကိုင်ဖို့၎င်းတို့၏နိုင်ငံများတွင်ထားခဲ့ပါ။ ရှိခြင်းမဟုတ်၏စိတ်ကူး အခွန်ပေးဆောင်ဖို့ တဦးတည်းရဲ့ဝင်ငွေကျော်ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည်သူမဆိုများအတွက်ကြိုဆိုကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်, ဒါသင်ဝင်ငွေပေါ်အခြေခံပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သလဲဆိုတာပေါ်မှာဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ဝင်ငွေသမျှငွေပမာဏမဆိုအခွန်အဖြစ်နုတ်ယူစရာမလိုဘဲအပြည့်အဝ၌သင်တို့ထံသို့မရောက်သေချာဘို့ငါသိ၏။ ချွေတာအပေါ်စိတ်အားထက်သန်နေသောလူများအတွက်, ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သင်အခွင့်အလမ်းမတတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောတိုင်းပြည်ကနေလူမျိုးပေါင်းစုံများအတွက်ကျင်းပမယ့်လိပ်ခေါ်ဆိုခဖြစ်ရှိခဲ့သည်လျှင်, သင်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုရှာဖွေမည်! ဤသည်မှာလုံးအဖြစ်ဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီးအတွက်လုပ်သားအင်အားသည်မည်မျှကွဲပြားခြားနားသည်။ ပေါင်းစုံနှင့် Cross-ယဉ်ကျေးမှုအလုပ်လုပ်အတွေ့အကြုံရှာနေလူတို့အဘို့, သင်သည်လက်ျာမြို့ရွေးကောက်တော်မူပြီ။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်သော်လည်းတစ်ခုသာအထူးသဖြင့်နိုင်ငံသားများထံမှလူမျိုး၏ပါဝင်သောလုပ်သားအင်အားနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းများတွေ့ရှိရန်အလွန်ဘုံမဟုတ်ပါဘူး။
အသုံးအများဆုံးသို့သော်သင်ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ကြီးနှင့်နိုင်ငံများမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူသင်၏အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဝေမျှဖို့ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဂုဏ်အသရေကိုသူတို့စီးပွားရေးနှင့်စည်းရုံးရေးရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်ရန်အညီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ, စရိုက်, အမူအကျင့်, ဘာသာစကားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများထံမှကွဲပြားခြားနားသောလူများကအသကျရှငျ၏အထွေထွေလမ်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရလိမ့်မယ်။ အများစုမှာအဖွဲ့အစည်းများအသင်းအဖွဲ့ဝင်များကမိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကနေကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုများဘွန်းနှင့်တခုအဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရဖို့ရှိရာရိုးရာဖြစ်ရပ်များစည်းရုံး။
ဒူဘိုင်း၏တစျခုဖွစျသညျ အတွက်အသက်ရှင်ရန်အလုံခြုံဆုံးမြို့ကြီးများ, အတော်လေးနိမ့်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနှင့်အတူ။ ဤနေရာတွင်လုံခြုံရေးန်ဆောင်မှုနေထိုင်သူများနှင့်ခရီးသွားဧည့်သည်ပညတ်တရားလိုက်နာဖြစ်ကြောင်းသေချာသည်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ ယုတ္တိနည်း, လူတွေသူတို့ဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏သို့သော်သင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအာရုံကိုအမြဲတမ်းလုံခြုံရေးအပေါ်တိုးတက်လာဖို့လုပ်လျက်ရှိသည်အားထုတ်မှုပေးထားကြသည်ရှိရာမြို့တမြို့နေထိုင်ကြောင်းသိရန်အရေးကြီးသည်ဘယ်မှာနေပါစေ Self-သတိထား၎င်းတို့၏လုံခြုံရေးဖြစ်သင့်သည်။
အဲဒီမှာနှောင်းပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သို့မဟုတ် running ဆိုင်းလိုအပ်သည့်ဒူဘိုင်းအတွက်အများအပြားအလုပ်အကိုင်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးမြို့လုံခြုံသောနေရာတွင်သင်အများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုသွားကြဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသိမှတ်ကြလော့။ လုံခြုံမြို့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းဤနေရာတွင်မိသားစုများပြုစုပျိုးထောင်အတွက်တိုးမြှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒူဘိုင်း, သင်သည်အသက်ရှင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်နှင့်သင့်မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်နိုင်မည့်နေရာတစ်နေရာစေအများအပြားအဆောက်အဦများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများရှိပါသည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းမှသင့်မိသားစုနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေကြလျှင်ဒီတော့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအများကြီးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
Credit: ဒူဘိုင်းရဲက Instagram ကို
ဒူဘိုင်းသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ၏အဓိကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအချက်အချာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသည်ရုံးချုပ်သို့မဟုတ်မြို့တော်တွင်ရုံးခွဲများရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အာရဗစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စကားကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောကြသည်။ အလုပ်နှင့် ဒူဘိုင်းတွင်နေထိုင် သင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်၌ယှဉ်ပြိုင်ရန်သင်လိုအပ်သည့်ခိုင်မာသောခြေလှမ်းများနှင့်ထိတွေ့မှုကိုပေးပါလိမ့်မည်။ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကသင့်အားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လိုအပ်သောကျင့် ၀ တ်များဖြင့်ပြင်ဆင်ပေးသည်ဏနောက်တစ်နေ့အဆင့်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျု့ံ။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်များကိုဒီမှာနထေိုငျသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်သူများအဘို့အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သကဲ့သို့လူအမြားစုက၎င်းတို့၏ရှေးခယျြမှု၏အခြားနိုင်ငံများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်စေရန်ခြေလှမ်းတခုအဖြစ်ဒူဘိုင်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိတွေ့မှုနှင့်အတူကဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာလုပ်ကိုင်ဖို့ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အဆုံးမဲ့အခွင့်အလမ်းတခုပြည်, ဒူဘိုင်းနေဆဲအိပ်မက်အလုပ်အကိုင်များကိုတညျဆောကျဖို့နေရာဖြစ်နေဆဲပင်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ, ခရီးသွားလုပ်ငန်း, ဧညျ့, နည်းပညာနှင့်အများအပြားပိုပြီးနှင့်အတူတော်တော်များများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Expo2020 ရုံထောင့်ပတ်လည်မှာအတူ, ပို. ပင်, အခွင့်အလမ်းများကိုဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အိပ်မက်အလုပ်လေယာဉ်ဆင်းသက်များအတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံ။ တစ်ဖွဲ့လုံးကယူအေအီးသငျသညျကိုးကှယျခွငျး၏အရပျရှိခြင်း, ဒီမှာအားလုံးဘာသာတရားကလူကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဤအရပ်မှမတူကွဲပြားမှုအားပေးကြောင်းအလွန်စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုအပေါ်စိတ်အားထက်သန်နေသောသူတို့အဘို့, သငျသညျအထဲကထွက်ခွာသွားကြသည်မဟုတ်။ ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်နေတာစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍပါဝင်မှုကိုအားပေးရန်အတွက်အစိုးရအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအစပျိုးမှတဆင့်အတော်လေးလွယ်ကူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ဒါကဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအရေအတွက်အဖြစ်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်တွင်းဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတက်ပေါက်ခြင်းနှင့် blooming အတွက်ထငျရှားပါသညျ။ အခြေခံအဆောက်အအုံထိပ်တန်းထစ်ဖြစ်ပြီး, အဓိကလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာနေရာအဖြစ်, မြို့ဗျူဟာမြောက်တကမ္ဘာလုံးလွယ်ကူသောခရီးသွားအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်တည်ရှိသည်။ အသက်တာ၏အရည်အသွေးကောင်းသောဖြစ်ပြီး, အားလပ်အဆောက်အဦကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြသည်။
Theresa- R. -Fianko